Finoana sy fankalazana :: Mikasa hampihemotra ny Paska ny FLM • AoRaha
Maminavina ny fanemorana ny fetin’ny Paska any amin’ny faran’ity volana avrily 2020 ity ny Fiangonana Loterana eto Madagasikara (FLM), raha toa ka hitohy ny fepetra fihibohana hampiharin’ny fitondram-panjakana. Mifarana amin’ity herinandro ity ny fe-potoana tapa-bolana nidirana tamin’ny fihibohana saingy ho tafiditra ao anatin’ny andro famerana ny fivezivezena sy fijanonana any an-trano ny datin’ny Paska, amin’ny 12 avrily, raha miitatra ny fihibohana.
“Tsy vao izao isika no nampihemotra fankalazana tahaka ny Paska. Raha mbola misy ny fihibohana dia azo atao tsara izany, ary tsy voatery ho amin’ny daty voafaritra no hanamarihana ny Paska”, hoy ny pastora Rakotonirina David, filohan’ ny FLM sady mpitarika ny FFKM ankehitriny, teny amin’ny foiben’izy ireo teny Andohalo, omaly.
Mitoetra ho vinavina ihany io fanemorana ny fotoana hanamarihan’ny FLM ny fetin’ny Paska amin’ ity taona ity io. “Miankina amin’ny fanapahan-kevitry ny fanjakana ihany izany. Manaraka an’ireo fepetra efa nolazain’ny Filohan’ny Repoblika kosa isika sady mitondra am-bavaka hatrany ny ady atao amin’ity aretina ity (Ndlr: coronavirus)”, araka ny fanampim-panazavan’ny Filohan’ny fiangonana Loterana.
Nohamafisiny ny fanentanana ny rehetra mba hitondra am-bavaka ny firenena hisorohana ny fihanaky ny tsimok’aretina “Covid-19” eto Madagasikara.
Samy nilaza ny hiandry izay fanapahan-kevitry ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry avokoa vao hanambara ny heviny mikasika ny fankalazana ny fetin’ny Paska amin’ny alahady 12 avrily izao, ireo fiangonana kristianina hafa. Toy izany koa ny fandraisana fanapahan-kevitra amin’ny fialan-tsasatr’ ireo mpianatra eo anivon’ ireo sekolim-pinoana kristianina eto Madagasikara.
“Tsy maintsy miandry ny fanambaran’ny Filohan’ny Repoblika ny zava-drehetra. Hisy ny fivoriana hiarahanay filoham-piangonana, aorian’ izany. Avy eo, hisy ny fanambaràna hatao”, hoy ny mpitandrina Andriamahazosoa Irako Ammi, filohan’ny FJKM. Andrasana anio hariva ny fanambaran’ny Filohan’ny Repoblika mikasika ny fepetra manaraka ao anatin’izao fiatrehana ny valanaretina “coronavirus” eto amin’ny tany sy ny fanjakana izao.